Fanambarana ofisialin'ny minisitry ny fizahantany Haiti momba ny rivodoza Irma
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fanambarana ofisialin'ny minisitry ny fizahantany Haiti momba ny rivodoza Irma
Taorian'ny fiakaran'ny rivodoza Irma tany Karaiba, dia feno fankasitrahana i Haiti fa nipoitra tsy nisy naratra. Ao anatin'ny fanahin'ny fiarahamonina iombonanay Karaiba, i Haiti dia manitatra ny fandraisam-bahiny, ary koa ny fanampiana fanampiana rehetra, amin'ireo nosy voakasik'izany rehetra izany.
Ny serivisy rehetra dia mijanona hatrany ary manohy mandray ireo mpitsidika izahay. Ny mpitsangatsangana dia asaina manatona ny masoivohon'ny mpitsangatsangana eo an-toerana na ny tompon'andraikitra amin'ny famandrihana ho an'ny fandaminana amin'ny antsipiriany momba ny famandrihana.
Torohevitra mpitsidika ofisialy Tiorka sy Caicos momba ny rivodoza Irma
9/11 sy ny endrika miova amin'ny fampihorohoroana silamo